မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ကျွန်တော့ကို သူငယ်ချင်း Candy က ဒီဇင်ဘာပိတ်ရက်မှာ ဘာလုပ်မယ် (Tag) Post လေး Tag ထားလို့တင်ပါရစေ။ ဒီဇင်ဘာပိတ်ရက်မှာ ဘာလုပ်မယ် ဆိုတာလေးမပြောပြခင် ဒီဇင်ဘာနဲ့ပါတ်သက်တဲ့ အမှတ်တရလေးတွေကို အရင်ပြောပါရစေ။ငယ်ငယ်ကဒီဇင်ဘာဆို အနွေးထည်ကိုဝတ်၊ အိမ်အပြင်ကမှုန်ဝါးဝါးမြင်ကွင်းကို ကြည့်တတ်တဲ့ကျွန်တော်။ ဆောင်းရာသီမှာ ပါးစပ်ထဲက လေကိုမှုတ် ထွက်သွားတဲ့ အခိုးအငွေ့တွေကို နှစ်သက်တတ်သောကျွန်တော်။ ချမ်းအေးတဲ့နံနက်ခင်းတွေမှာ ရေနွေးကြမ်းပူပူကို မှုတ်မှုတ်သောက်တတ်သောကျွန်တော်။ ညခင်းတွေမှာ မီးဖိုထားတဲ့ သပြေမြစ်(ထန်းပင်မြစ်)ဖုတ်ဆိုင်တွေကို စိုက်ကြည့်တတ်သောကျွန်တော်။ အရွယ်ရောက်လာတာနဲ့အမျှ ဒီဇင်ဘာရှိတဲ့ဆောင်းရာသီကို ချစ်တတ်လာခဲ့ရပါတယ်။နည်းနည်းအရွယ်ရောက်လာတော့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ အိမ်ရှေ့က Church ကျောင်းမှာသီချင်းလိုက်တိုက်၊ ကျွေးတာစားပြီး တကယ်တမ်းအိမ်တွေလိုက်ဆိုတော့ မလိုက်ခဲ့တဲ့သူပေါ့။ X’masနေ့တွေမှာ အထွေအထူးလက်ဆောင်တွေမရခဲ့ဖူးပေမဲ့ X’mas လက်ဆောင်လေးတွေကို သဘောကျခဲ့သူပါ။ဒီ့ထက်ကြီးပြင်းလာတော့ ဒီဇင်ဘာမှာ ခရီးတွေသွားတတ်လာပါတယ်။ ပထမဆုံးထွက်ဖြစ်တဲ့ခရီးစဉ်က ကျောင်းကဆရာမစီစဉ်ပေးတဲ့ ပုပ္ပါးတောင်ကလပ်ခရီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ အလွန်ပျော်စရာကောင်းသလို ကိုယ်မသိဘူးတာတွေပါ တအံ့တသြနဲ့သိခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ ပုပ္ပါးတောင်မှာနတ်တွေရှိတယ်ဆိုတာရယ်၊ အဲ့ဒီနေရာတွေကိုသွားရင် ၀က်သား၊ ကြက်ဥစတာတွေကို ယူမသွားကောင်းဘူးလို့ ဆိုတာတွေပါ။ အဲဒါကြောင့် ကားထွက်ပြီးမကြာခင်မှာပဲ ကားပေါ်မှာရှိသမျှထမင်းဘူးများကိုဖွင့်ကာ ကျွန်တော့သူငယ်ချင်း၊ ကျောင်းသားများက အနစ်နာခံစားသုံးကြပါတယ်။ :P ထမင်းဘူးများကို ကားအမိုးပေါ်မှာတင်ထားပြီး ကျွန်တော်နဲ့ကျောင်းသားအများစုဟာ ကားအမိုးပေါ်ကနေလိုက်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အောက်မှာရှိတဲ့ ထမင်းဘူးပိုင်ရှင်တွေဟာ အပေါ်ကကျောင်းသားတွေလုပ်သမျှ ဘာဆိုဘာမှ မသိလိုက်ကြပါ။ကျွန်တော့ထမင်းဘူးထဲမှာလည်း ၀က်သားပါသဖြင့် ကျွန်တော့သူငယ်ချင်းများ၏ အားပေးခြင်းကိုခံလိုက်ရပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆို တော်တော်ဆိုးပါတယ်။ ကြက်ပေါင်ကြီးမြင်နေလျက်နဲ့ ဒါဝက်သားကွဆိုပြီးစားပစ်လိုက်တာ တားချိန်တောင်မရလိုက်ပါဘူး။ ကျွန်တော့မှာ ပျော်လည်းပျော်၊ စိတ်လည်းပျက်နဲ့ အဲဒီခရီးကိုဆက်ခဲ့ရပါတယ်။ နောက်အမှတ်ရစရာတစ်ခုက အဲဒီခရီးစဉ်မှာပဲ ကျွန်တော့အမေ၀ယ်ဆင်ပေးလိုက်တဲ့ ဦးထုပ်လေးဟာ လေနဲ့အတူလွင့်ပြီးကျကျန်ခဲ့ရပါတယ်။ အမေဆူခံရတော့မယ်လို့ ထင်ပေမဲ့ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ဝမ်းနည်းနေတဲ့ကျွန်တော့ကို အမေမဆူခဲ့ပါ။ ကျေးဇူးပါမေမေ။အဲ့ဒီကတစ်ဆင့်တက်လာတော့ X’mas နေ့ရောက်တိုင်း ပုပ္ပါးတောင်မကြီးကိုတက်ခဲ့ပါတယ်။ တောင်မကြီးကိုတက်ရတာ တောင်ကလပ်ကိုတက်ရတာထက် အများကြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ တောင်တက်လမ်းဟာ ကားလမ်းမဟုတ်ဘဲ လူသွားလမ်းသာရှိတဲ့အတွက် တောင်တက်ချိန်မှာ အရမ်းပင်ပန်းရပါတယ်။ အချို့ဆိုရင် လမ်းတစ်ဝက်ကနေ လှည့်ပြန်သွားသူတွေရှိသလို၊ တောင်တက်လမ်းမှားပြီး သစ်ခုတ်သမားတွေ ဖောက်ထားတဲ့လမ်းတွေရောက်ကာ မျက်စိလည်ခဲ့ရသူတွေလည်းမနည်းပါ။ ဒေသခံတွေဟာ နှုတ်သရမ်းရင် လမ်းမှားတတ်တယ်လို့ အယုံအကြည်ရှိကြပါတယ်။ တောင်မကြီးကိုအတက်၊ အဆင်းလုပ်ချိန် လေးနာရီမှငါးနာရီအထိ ကြာတတ်ပါတယ်။ အပေါ်ရောက်ခါနီးနေ ပိုမောလေမို့၊ အမျိုးသမီးတွေပါတဲ့အဖွဲ့ဆိုရင် ခဏခဏနားရ ရတာနဲ့ကို အချိန်ပိုကုန်တတ်ပါတယ်။ ထိပ်ပိုင်းရောက်လာလေ ပိုမတ်လာလေဖြစ်သလို၊ လေတိုက်နှုန်းကလည်းပြင်းလာပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေနဲ့ တောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်သွားရင် အလွန်ပဲပျော်ရွှင်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ အောင်မြင်မှုရဲ့အရသာ၊ အေးမြတဲ့လေထု၊ တိမ်ထုနဲ့အတူ အသံကုန်ဟစ်နေကြသူတွေလည်း မနည်းပါ။ ကျွန်တော်တက်ခဲ့တဲ့ နှစ်တွေတုန်းကဆိုရင် တောင်ပေါ်မှာ စေတီလေးတစ်ဆူနဲ့ မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားစက်ရုံလေးသာ ရှိပါသေးတယ်။ အခြားဘာဆိုဘာမှမရှိပါ။ အခုတော့ တောင်ပေါ်မှာဘာတွေရှိနေတယ်၊ ဘာတွေမရှိတော့ဘူးဆိုတာ မသိပါ။ဆယ်တန်းအောင်ပြီးတော့ X’mas ဆိုရင် မန္တလေးကနေ ပြင်ဦးလွင်ကို ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ တက်တတ်သလို၊ စစ်ကိုင်းတောင်ကိုလည်း အလျင်းသင့်သလိုသွားတတ်ပါတယ်။ တက္ကသိုလ်ပြီးနောက် အဖော်ကောင်းရင် ကျိုက်ထီးရိုးတောင်ကိုပဲ တက်ပါတော့တယ်။ခုစင်ကာပူရောက်လာတော့ ဘယ်တောင်မှမတက်ဖြစ်တော့ပဲ Orchard မှာပဲဓာတ်ပုံရိုက်ပါတော့တယ်။ :P ဒီနှစ်မှာဖြစ်ချင်တော့ အရင်နှစ်တွေက ဓာတ်ပုံအတူတူရိုက်ခဲ့တဲ့သူငယ်ချင်းဟာ စ’လုံးကိုစိတ်နာစွာနဲ့ ပြည်တော်ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလို 8Yarတစ်ယောက် X’mas ကိုပျင်းခြောက်ခြောက်ဖြတ်သန်းရတော့မဲ့ အခြေနေမှာ ဂျပန်က 8Yarကောင်မလေးဟာ စင်ကာပူမှာ အလုပ်ရသွားခဲ့သဖြင့် 8Yar တစ်ယောက်ရူးမတက် အပျော်ကြီးပျော်ခဲ့ရပါသေးတယ်။ ဒါအပြင် 8Yar ရဲ့ချစ်ညီမအငယ်ဆုံးလေးကလည်း မကြာခင်ကပဲ Singapore မှာအလုပ်ထပ်ရသွားတဲ့အတွက် 8Yar ရဲ့ဘဝလေးဟာ အခုဆိုရင် စည်စည်ကားကားသိုက်သိုက်ဝန်းဝန်းနဲ့ စိုပြေစပြုလာပါပြီ။ဒီနှစ်တော့8Yar တစ်ယောက် အမြဲခရီးသွားတတ်တဲ့ သူငယ်ချင်း ဇနီးမောင်နှံကို ဇွတ်အတင်း အကူညီတောင်း၊ အင်ဒိုနီးရှား ဘတ်တန်ခရီးစဉ်ကို စီစဉ်စေခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ဒီဇင်ဘာ 25 ရက်နေ့မှာ 8Yar တို့ပျော်ရွှင်စွာ ခရီးထွက်ပါမည်ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြရင်း ဒီဇင်ဘာပိတ်ရက်မှာ ဘာလုပ်မယ် (Tag) Post လေးကိုနိဂုံးချုပ်ပါရစေခင်ဗျာ။ဖတ်ပြီးသွားရင်တော့ ထုံးစံအတိုင်း Tag Post တင်ဖို့သာပြင်ထားပေရော့ ဘယ်သူတွေလည်းဆိုတော့.....အစ်ကိုပီတာ, အစ်မမြသွေးနီ, အစ်မ Nine Nine SaNay, အစ်မဝါဝါခိုင်မင်း, မဒမ်ကိုး, သမီးစံ, အစ်ကိုမောင်မျိုး, အစ်မဝါခေါင်မိုး, အစ်မမိုးခါး(* . * . ထာဝရကြယ်စင် . * . * .), အစ်ကိုဒုတိယလူ, အစ်ကိုမြစ်ဆုံ, မောင် (စွယ်စုံကျမ်း) , KO MGTHANT, အမှတ်တရ နေ့စွဲများ..., အစ်မမိုးပန်းချီ, puupuu, အစ်ကိုအောင်(ပျူနိုင်ငံ), ညီရဲသစ်, အစ်မအိမ်မက်စေရာ, ဘုန်းဘုန်း ရွှေဝန်းရတနာ, Junemoe, အလင်းသစ်၏နေ့စွဲများ, ဘုန်းဘုန်း ချယ်ရီမြေ, အစ်မ Nge Naing, အစ်ကိုKhin Maung Chin, အစ်မ khin oo may, အစ်ကိုYan Aung, အစ်ကို မြစ်ကျိုးအင်း, Nandar's Life, ဘိုဖြူ, မိုးဇက်......အားလုံး၊ အားလုံးပါ။ အချို့လည်းရေးပြီးကုန်ကြလို့ မ Tag တော့ပါဘူးခင်ဗျာ။ ကျန်သွားခဲ့ရင်လဲ Comment ထဲမှာ ဆုံးမစာလေးရေးပေးသွားပါလို့ တောင်းပန်ပါရစေ။ ရေးပြီးသားဆိုရင်လည်း ချောတီးနော်။ မရေးပဲနေရင်တော့ CBox မှာလာအော်ပြီသာမှတ်။ ဟွင်း ဟွင်း ဟွင်း ဟွင်း :Pစတာနော်။ အားလုံးက အလုပ်တစ်ဖက် Blog တစ်ဖက်နဲ့ အရှုပ်လုပ်.... အုပ်... အုပ်... အဲလေမှားလို့ အလုပ်ရှုပ်နေကြတာဆိုတော့ အဆင်ပြေရင်ရေးပေးပါလို့ တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာ။အားလုံး Merry X’mas ပါခင်ဗျာ။8Yar23rd Dec 2011
လုံးလုံးနဲ့ ၀၀ကို မနာလိုဘူး.. ခရီးသွားမယ်ပေါ့.. အစောထဲကတော့ သိပါတယ်.. နီးလာတော့ ပိုမနာလိုဘူး.. အဲ့လက်မှတ်ကို သေချာသိမ်း.. လာခိုးမှာ ဟဟဟသူအဆင်ပြေနေတော့အသံက စာစာနဲ့ ဟိုတလောကပုံနဲ့ တခြားစီ :P
24 December 2011 00:14
အေးဟယ်လုံးဝပဲ နာတို့လဲနာလိုဘူးနော်ကြောက်လို့လိုက်ပြောတာနော် မယုံနဲ့ မြန်မြန်သာလက်ထပ်လိုက်
24 December 2011 00:43
ချစ်သူနဲ့နီးနီးဆိုရင် ကောင်းတာပေါ့ဗျာအပေါ်ကနှစ်ယောက်က မနာလိုဘူးတဲ့နော်ညီမလဲ ရောက်နေပြီလားပျော်စရာကြီးနော်...
ဘယ်ဟိုတယ်မှာလဲ မောင်အိပ်ယာ..တွေ့ကြရင် ကောင်းမလား..မတွေ့ကြရင် ကောင်းမလား.. :D
24 December 2011 01:33
24 December 2011 13:44
25 December 2011 03:23
25 December 2011 04:19
တဂ်ပို့စ်လေး ဖတ်သွားတယ် မောင်8Yar ရေ။ပျော်ရွှင်ဖွယ်ခရီးလေးဖြစ်ပါစေလို့နော်။Merry Christmas & Happy New Year !!!စိတ်ဓာတ်အစဉ်ကြည်လင်အေးမြပါစေကွယ်။မေတ္တာဖြင့်အန်တီတင့်
26 December 2011 03:06
ညီ့အတွက် ပျော်စရာတွေ အများကြီးပဲး) ၀မ်းသာတယ် ညီရေ ပျော်စရာတွေ အမြဲကြူံပါစေဗျာ ။တဂ်စ်ပို့စ်က ရေးတော့ရေးမယ်လေ အစ်ကိုက ပိတ်ရက်မရသေးတော့ ဘာလုပ်မယ် ဘာအစီစဉ်တွေရှိလဲဆိုတာ မသိသေးလို့ နောက်နှစ်စောင့်နော့်း)))ပျော်ရွှစ်ဖွင့် ခရစ်စမတ်နဲ့အတူ နှစ်သစ်မင်္ဂလာပါဗျာ
26 December 2011 09:46
အွန် သူက အဲလိုကိုး ) ဒါကြောင့်တက်ကြွတဲ့ကြက်ဖကြီးဖြစ်နေတာကိုးးးးးးကဲ ကဲ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ ဒီဇင်ဘာနေ့ရက်များဖြစ်ပါစေ အိပ်ယာကလေးရေး)အမ မဒိုးကန်
27 December 2011 14:58
၈ယာရေ .... တဂ်ပို့စ်လေးလာဖတ်သွားပါတယ်နော်..ပျှော်ရွင်တဲ့ ဒီဇင်ဘာနေ့ရက်လေးတွေ ဖြစ်ပါစေ...မမဒိုးကန်လိုပဲပြောလိုက်တယ်နော်.... ချိုမြိန်တဲ့ ဒီဇင်ဘာခရစ်စမတ်နဲ့ ပျှော်စရာကောင်းတဲ့ နှစ်သစ်ကို အတူတူ ကြိုနေမယ်နော်..... ဟက်ပီးနယူးရီးယားပါရှင့်........ ခင်မင်တဲ့ ပူးပူး :)
28 December 2011 15:31
28 December 2011 17:33
28 December 2011 21:25
1 January 2012 02:49
8yarရေ...။ သတိတရ tagတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ http://www.myathwayni.com/?p=3763 မှာ Tag Post ၂ခုကို ပေါင်းေ၇းပေးထားပါတယ်။ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေရှင်..။
2 January 2012 17:36